DAGAALKII 104AAD EE BILOWGA, AGRO, KIEV - MAQAALLO
Ukraine waxay had iyo jeer caan ku tahay guulaheeda bani'aadamnimada, iyo haddii aad horayba u suurtagashay in ay ku soo galaan meelaha ugu faa'iidada badan ee xiriirka suuqa kala duwan ee agronomka iyadoo la bilaabayo biloow badan oo lagu guuleysto, ka dibna waxaa jira war wanaagsan.
Febraayo 15, 2018, 104-da Dagaal ee Bilowga iyo Agro ayaa la qaban doonaa, kaas oo abaabulaya mashruuca maalgashiga Startup Network, HUB 4.0 iyo mashruuca horumarinta ganacsiga AgroTalks.
Ka qaybqaadashada dhacdada waa bilaash, si kastaba ha ahaatee, kaliya kuwa u gudbaya marxaladda xulashada. Si aad u tijaabiso naftaada dagaal maalgashi, waxaad u baahan tahay inaad iska diiwaangeliso bilowga iyo buuxi foom su'aalo ah, sug inaad aragto khabiirada Startup.Network.
Dagaalku wuxuu ku dhici doonaa laba marxaladood:
17: 00-19: 00 - falanqaynta gudida (horayba ganacsatada khibrad u leh waxay la wadaagi doonaan aqoontooda)
19: 00-21: 00 - bandhigyada bilawga ah.
Kaliya 6 daqiiqo ayaa la bixiyaa soo bandhigida hal mashruuc oo horay loo soo xulay: Waqtiga nuska ayaa la qaadayaa qoraaga, qeybta labaadna waxaa lagu kharash gareeyaa su'aalaha iyo faallooyinka. Guusha ayaa lagu guuleysan doonaa mashruuca oo garsoorayaasha siin doona kubbado badan.
Taariikh iyo wakhtiga Battle of Startups: Febraayo 15, 2018, 17:00. Goobta: Kiev, Yaroslavsky Pereulok, 1/3, HUB 4.0. Gelitaanka waa bilaash, iyadoo diiwaangelin ka horeysa.